ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: မလေးရှားရှိ တရားမဝင်မြန်မာလုပ်သား အားလုံး တရားဝင် အထောက်အထား ထုတ်ပေးမည်
မလေးရှားရှိ တရားမဝင်မြန်မာလုပ်သား အားလုံး တရားဝင် အထောက်အထား ထုတ်ပေးမည်
အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် လူသေဆုံး သည်အထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မလေးရှား နိုင်ငံတွင် တရားမဝင်မြန်မာလုပ်သား နှစ်သိန်းခန့် ရှိနေပြီး ၄င်းတို့ကို တရားဝင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိရန် အထောက် အထားများ ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူ လုံရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်က ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားမဝင်မြန်မာ လုပ်သားများကို တရားဝင်အထောက်အထား ထုတ်ပေးသည့် ပုံစံမျိုးအတိုင်း မလေးရှား နိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများကို နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရညှိနှိုင်းကာ တရားဝင် အထောက်အထား ရရှိအောင် ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှု ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက လုပ်ဆောင်ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကဆိုသည်။
"သံရုံးမှာ ဝန်ထမ်းအင်အားက နည်းနေတယ်။ လုပ်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်က များတယ်။ ဝန်ထမ်းအင်အား တိုးဖို့ လိုတယ်"ဟု အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါ်ဝင်းမော်ထွန်းက ပြောကြားသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း တရားဝင်အထောက် အထားမရှိသဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၀၀၀ ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ယင်းတို့အနက် အလုပ်သမား ၃၀၇ ဦးမှာ အထောက်အထား မရှိသဖြင့် ဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံ ထားရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ဇွန်လ ၁၅ရက်နှင့် ၁၆ရက် နေ့တို့တွင် ပြန်လာသူစုစုပေါင်း ၄၅၉ ဦး ရောက်ရှိလာပြီး ၄င်းတို့မှာအကြမ်းဖက်မှု ဂယက်ကြောင့် ပြန်လာသူများ မဟုတ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှု ဂယက်ကြောင့် ပြန်လာသူ ၂၅ဦးမှာ ဇွန်လ ၁၇ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နောက်ထပ်ပြန်လာရန် မလေးရှားနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးတွင် တရားဝင် အထောက်အထား(Certificate of Identity) ပြုလုပ်နေသူ ၁၄၀ ဦးရှိကြောင်း အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ထံမှ သိရှိရသည်။
pm Tuesday, June 18, 2013 Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်
Pink up and down button
ဧဒင်ရဲ့ MP3 သီးချင်းတွေကြိုက်ရင်ယူသွား နော်
အောင်လေး နည်းပညာ (နှင့်) ပေါ်ပြူလာသတင်းများ
IT Field Network
Blog Archive November (7) December (74) January (110) February (99) March (153) April (181) May (256) June (293) July (326) August (329) September (397) October (351) November (350) December (435) January (440) February (346) March (343) April (367) May (345) June (172) July (178) August (140) September (111) October (120) November (57) December (70) January (37) February (61) March (21) April (15) June (81) July (8) August (5) September (6) November (1) December (2) August (3)
အခမဲ့ Antivirus များ
Blogger များအတွက် အရောင်ကုဒ်ယူရန်
window 8 ဇော်ဂျီလေး..
Rain Story (ပြည့်စုံ)
baby(mc wai lin)
( မေ )
( 8.4 )
Kyaw Hhi Ha(Me Lay)
Diary Of Jane-Breaking Benjamin
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ (ဆို- ရဲလေး ၊ သားကြီး)
ဆောင်းလေပြေညှင်း (တေးဆို - မေသူ)
justin ရဲ့ baby
My Home Paradise (ဆို-အောင်လ)
My Home Paradise
ချစ်တန်ခိုး( ၀သုန် )
အငဲ( မယုံနိုင်ဘူး )
သိရက်နဲ့ (ဆို - အဂ္ဂမိုး)
နေညိုရင် ( လင်းနစ် )
လရောင်ဝေး (တေးဆို - ကြိုးကြာ၊ စင်ဒီ)
မ ရယ် (မမ)
နန္ဒစိုင်း ရဲ့ ရင်လွဲခြင်း
Good Bye(Myo Oo)
“ အနားနားဘေးမှာ “ တေးဆို အဂ္ဂမိုး လွမ်းပိုင်
ဒီအတိုင်း တေးဆို .ဖော်ကာ(wanted)
(ရဲလေး တို့ နှစ်ယောက်အကြောင်း)
Bay gyi (ပြန်လာခဲ့ပါ)
ကန့်သတ်ချက်(တေးဆို - ၀ိုင်းဝိုင်း)
ထူးဝါးရဲ့(i love you)
I love for you
Avril Lavigne ရဲ့ innocene
အိမ်မက် ( နိုင်ရာ)
ထူးအလ်လင်း မီးမီးခဲ( မင်း )
သိပ်ချစ်လို့ပါ ( စုမီ )
ချစ်နေမိပြီ(ဆို - အဂ္ဂမိုး )
ထူးထူးခြားခြားပုံနှင့် ဟာသပုံများ (113)
မော်ဒယ် ဖက်ရှင် (146)
သင်္ကြန် sexy photo မျာ.....(8 photo)
Facebook Page အကောင့်အခိုးခံရပြီး မကောင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်လို စာတွေရေးသားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာကို နှမသားချင်းမစာနာဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်
အစ်မ မရှိစဉ် ခယ်အိုဖြစ်သူမှ ခယ်မအား သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်
၉၊၀၉၊၂၀၁၄နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့နှင့် ၅၆ ကီလိုကွားဝေးသော နခေါပုထုန် မြို့နယ်အပိုင် ဆမ်ဖလန်းရပ်ကွက်ရှိ ပလတ်စတစ်ရုံတွင် အ...
အနုပညာရှင်ဖြစ်ရန် မိခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ကာ အိမ်ပေါ်မှဆင်းခဲ့ဖူးကြောင်း ဂျေ လို ပြောကြား
ဂျနီဖာ လိုပက်ဇ်က မိမိသည် အနုပညာသည် ဘဝကို ခံယူခွင့်ရရေးအတွက် အိမ်ခြေရာမဲ့ ဘဝကို ခေတ္တ ဖြတ်သန်းဖူးကြောင်း ထုတ်ဖော် ဝန်ခံခဲ့သည်။ အသက်(၄ ၃)...
Aye Myat Thu and Ma Htet Selfie Snapshots
Ma Htet ( Make Up Artist ) in myanmar upload these photos on her facebook to share with her fans. She is not the only but yeah your favorit...
ကမ္ဘာဖလား ဘောလုံးပွဲ ကို ဖုန်းနဲ့ ကြည့်ချင်သူများ ဒီ APK လေးသာ ဖုန်းထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါ..
http://www.channyein.org/2014/04/blog-post.html www.channyein.org ယုံကြည်ချက်တစိတ်တပိုင်းကို ဖွင့်အံဖို့ နှင့် လေ့ကျက်မိသမျှ ...
ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် သီးခြား Search Engine စတင်မည်
ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် သီးခြား Search Engineတစ်ခု စတင်လည်ပတ်လာတော့မည်ဟု သတင်း များက ဖော်ပြခ...
Eain Dra Thiri Ko
အသစ်တင်တိုင်း အီးမေးလ်ကဖတ်ချင်ရင် အီးမေးလ်လိပ်စာထားခဲ့နော်.
snowStorm.useTwinkleEffect = true; // let the snow flicker in and out of view
ဧဒင်အချစ်ပုံပြင် သို့လာရောက်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ...... Theme images by enot-poloskun. Powered by Blogger.